Poulsbo's Perch-Bumelwane babucala Getaway
Indawo yokuhlala yabucala, epholileyo kufutshane nolwandle kunye nemizuzu esi-8 yokuhamba ukuya edolophini ePoulsbo. Ifakwe kwindawo ethandekayo yegadi, kwindawo ezolileyo. Yonwabela iindawo zokutyela ezikufuphi, i-kayaking, iimyuziyam, indawo yokubhaka, iigalari zobugcisa, iipaki, i-marina kunye nezinto eziluncedo ekuhlaleni. Uthutho olulula ukuya kwiindawo ezahlukeneyo ze-Olimpiki yePeninsula yokubona kunye neDowntown Seattle. I-Continental Breakfast iyafumaneka. Uya kusebenza kunye nezithintelo zokutya ngexesha logcino. Kufuphi namaziko ama-3 aseLwandle; Keyport, Bangor kunye PSNS.
Umnyango owahluke ngokupheleleyo kunye nowabucala emva kwendlu yehostele. Igumbi lokuhlambela elineshawa. IKitchenette inomenzi wekofu, imbiza yeti yombane, iToaster, imicrowave, ihotplate, izinto zokupheka, izitya ezahlukeneyo kunye neglassware. Kukho idesika, itafile kunye nezitulo, ifriji encinci, iayini kunye nebhodi yoku-ayina, iTV enentonga yomlilo, ibhedi enkulukazi kunye nesofa yokulala. Ukufikelela kwizinyuko (15). Ubushushu/i-Air conditioned, umsi kunye ne-carbon monoxide detector, isicima-mlilo, ikiti yoncedo lokuqala. Ukwanayo newasha yakho kunye nesomisi kwigumbi loncedo elisezantsi ukuze uyisebenzise ngasese.
4.99 · Izimvo eziyi-126
Ubumelwane obunobuhlobo kunye neepaki ezikufutshane, ukufikelela emanzini, ukukhwela i-kayaking ehlotyeni, i-Sly's Bakery, iMarina yeMarina, i-Antiques, i-Art Galleries, i-Ice Cream Parlor, iindawo zokutyela ezininzi kunye ne-Breweries zonke kumgama omfutshane wokuhamba. Yiza nerakethi yentenetya yomdlalo kwiLion's Park ekufutshane. Jonga iLiberty Bay ezantsi nje kwesitrato.
UBarbara nentombi yakhe, uWende, bafumaneka ngolonwabo ukuba kuyimfuneko ukuze babuze imibuzo okanye bancokole.